Hetsika fampiononana nataon'i Airberlin amin'ny sidina lavitra
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao » Hetsika fampiononana nataon'i Airberlin amin'ny sidina lavitra
Jolay 3, 2012
Mba hanolorana ny mpandeha amin'ny ambaratonga avo indrindra amin'ny fampiononana sy serivisy, ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka faharoa lehibe indrindra any Alemana dia manatsara hatrany ny vokatra - manomboka amin'ny volavolan'ny kabinina fiaramanidina, hatrany amin'ny
Mba hanolorana ny mpandeha amin'ny ambaratonga avo indrindra amin'ny fampiononana sy serivisy, ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka faharoa lehibe indrindra any Alemana dia manatsara hatrany ny vokatra - manomboka amin'ny famolavolana ny tranon'ny fiaramanidina, ka hatrany amin'ny sakafo matsiro sy fialamboly atolotra.
Ao anatin'ny fanitarana ny serivisy fanidina natolotra, indrindra ny Emira Arabo Mitambatra sy Amerika Avaratra, ny airberlin dia efa nanomboka nanatsara ny haavon'ny fampiononana tao anaty fiaramanidina lava-lava A330-200 tamin'ny fiandohan'ity taona ity. Ao amin'ny Economy Class, seza vaovao misy bantal anti-thrombosis ary fitsaharana loha azo ovaina tsirairay no manome fiononana tsara kokoa. Ao amin'ny Business Class, ny mpanjifa dia afaka manantena seza hipetraka tanteraka izay manome fampiononana tsara na mpandeha mipetraka na mandry.
Ny rafi-pialam-boly sidina vaovao dia mizatra ihany koa ankehitriny amin'ny kilasy fandraharahana sy kilasy toekarena amin'ny ankamaroan'ny fiaramanidina A330-200 an'ny airberlin. Ny seza tsirairay dia misy fitaovana fanaraha-maso, ahafahan'ny mpandeha misafidy ny fandaharana fialamboliny manokana avy amin'ny sehatra maro atolotra. Ny fanavaozana ny tranokely fiaramanidina lavitra rehetra miaraka amin'ny seza vaovao sy ny rafitra fialamboly ao anaty sidina dia tokony ho vita amin'ny volana Aogositra.
Ny serivisy fiaramanidina airberlin nahazo loka dia ampahany lehibe amin'ny fandraisana andraikitra fampiononana. Manomboka izao, ny mpanjifa ao amin'ny Economy Class koa dia hahazo headphone maimaim-poana hankafy ny programa fialamboly vaovao. Mikasika ny fameloman-tsakafo an-dalambe, airberlin koa izao dia manome serivisy serivisy tsara kokoa ho an'ny mpanjifa amin'ny Economy Class amin'ny sidina lavitra. Ny serivisy fisotroana fanampiny misy dia nitarina mba hahitana safidy aperitifa, divay, divay mamirapiratra, labiera ary liqueur. Ny mpanjifa dia mbola atolotra an-gazety sy gazety maro karazana, ary koa "Kit Amenity" izay nahazo loka tamin'ny sidina alina. Ny fampahalalana misimisy momba ny cabins fiaramanidina lava-airberlin sy serivisy sidina an-tserasera dia azo jerena ao amin'ny airberlin.com